राष्ट्रिय गद्धार घोषणा गरेका माधव नेपाललाई किन दोश्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भए ओली ? « Sagarmatha Daily News
राष्ट्रिय गद्धार घोषणा गरेका माधव नेपाललाई किन दोश्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भए ओली ?
काठमाण्डु, ७ साउन– एमालेभित्र पार्टी एकताका लागि दबाब बढ्दै गएपछि अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
उता नेपाललाई पनि पार्टी एकताका लागि दबाब बढेको छ । नेपालले बुधबार आफू निकटका नेतासँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने र रघुजी पन्तले आफ्ना धारणा राखेका थिए । न्यौपानेबाहेक सबैले पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने, कार्यदलले दिएको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने, नेताहरूमाथि हुने गालीगलौज र अनैतिक गतिविधि रोक्नुपर्ने तथा स्पष्टीकरणका नाममा एकता र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न नहुने बताएका थिए । नेपालले पनि आफू सम्मानजनक एकताका पक्षमा रहेको बताएका थिए । नागरिक दैनिकबाट